Loza goavana teny amin’ny by-pass :: Karohina ny mpamily taksibe nahafaty olona telo • AoRaha
Tsy hita popoka ary mbola karohin’ny zandary hatramin’ ny omaly tolakandro izay nahazoana ny vaovao farany ny lehilahy iray mpamily nitondra taksibe nitera-doza teny lalana amin’ny By Pass teny Ankazobe Alasora, tamin’ ny harivan’ny zoma lasa teo. Olona telo, mpianaka, sy lehilahy iray nandeha môtô, no namoy ny ainy tamin’io lozam-pifamoivoizana mahatsiravina io. Mpandeha taksibe sivy ambin’ny folo kosa no naratra.
Tsy mitsahatra ny miresaka sy manontany ny fianakavian’ity mpamily nahafaty olona ka karohina ity ny mpitandro ny filaminana amin’izao fotoana izao. Tokony ho tamin’ny enina ora sy sasany no nisehoan’ ny loza teny amin’ny By Pass tamin’io zoma io. Voadonan’ny taksibe iray aloha ny môtô « scooter » noentin’ilay lehilahy maty voalohany, sivy amby telopolo taona.
Na dia efa tsy afa-niala tamin’izany izany aza itsy fiara fitateram-bahoaka dia mbola tafavoaka ny arabe ihany koa. Nivadika sy
nahadona olona hafa teo akaiky teo indray ny fiara noentin’ny mpamily, avy eo. Voadona ka maty tamin’ izany ny mpianaka, zaza- vavikely iray, sivy taona, sy ny reniny, telo amby efapolo taona. Voalaza fa saika hiditra tao anaty fiara teo an-tsisin-dalana izy mianaka ireo.
Tsy tra-drano avokoa
«Samy maty tsy tra-drano ireo olona telo ireo. Naratra kosa ny ankamaroan’ireo mpandeha taksibe. Tsy misy atahorana ny ain’izy ireo na dia nisy voadona mafy ihany aza », hoy ny zandary eny Alasora, izay nizaha ny zava-nisy teny an-toerana. Notaomina tamin’ny fiara nihazo ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) ireo rehetra naratra.
Fantatra fa samy voadona mafy teo amin’ny lohany avy kosa ireo olona telo nindaosin’ny fahafatesana. «Tsy hita tao anaty fiara intsony ny mpamily sy ny mpamily mpanampy, taoriana kelin’ny loza. Ity farany no tonga nanatona anay, ny sabotsy maraina. Noho ny tahotra hono ny antony nandosirany», hoy ihany ny zandary. Mitohy ny fitadiavana an’ilay mpamily hatramin’ny omaly.
Fanamby amin’ny fiainana Zazalahy manana nofy goavana na dia very ray sy reny ary zandry aza
Loza teny am-panasan-damba Niara-lasan’ny rano izy roa vavy, mpizaobavy
Fisamborana jiolahy Lehilahy maty voatifitra sady nahitana basy mahery vaika
Famotorana momba ny fahafatesana Miantso fanampiana amin’ny fitsarana frantsay ny havan’ilay Karàna
Loza nandritra ny pantekoty :: Olona roa no namoy ny ainy, sivy ambin’ny folo naiditra hopitaly
Famerenana fitaovam-piadiana :: Basy mahery vaika sy bala maromaro azo tany Isandra
Fahitana razana Karàna lahy nihantona tetsy Ivandry